Wholesale Workwear Uniform vagadziri uye vanotengesa | qiangwei
1. Sarudza yakasununguka polyester / jira rekotoni, izvo zvisiri nyore kupuruzira, kupfeka, kupfeka kusingagumi uye kusuka, jira rakasununguka uye rinofema, hunyoro hwekumwa uye kubviswa ziya.
2. Iyo yakasarudzika lapel dhizaini inosimbisa iyo fashoni maitiro, uye kumberi chikwapuro zipi inotsvedzerera uye nyore kupfeka; Musiyano wemuvara dhizaini yekunze kumberi inoita kuti nguvo yese ive yakajeka uye yakajeka. Homwe hombe pamativi ese echipfuva, yakavhurika tambo yekusonesa, yakanaka uye ine rupo, inokwanisa kutakura ese marudzi emidziyo mune basa, yakapusa uye tetepa dhizaini inosanganisira ese marudzi emuviri chimiro uye chimiro.
3. Kuruboshwe ruoko ruoko ruoko, nyore kuisa peni, yakapusa uye inoshanda.
4. Chipfeko chine kusona kwakasimba uye kwakaperera, uye hazvisi nyore kupaza nekuvhura seams. Cuff uye hem zvinogadziriswa uye zvakasungwa nemabhatani akapfava uye akapusa, ayo ari nyore uye anoshanda.
5. Rutivi rwemberi kwetirauzi rine bhegi rekurerekera, uye iro rekuseri rinotorwa kuti riite kuchengetedza; Crotch yakasonerwa, kwete nyore kubvarura.
6. Rudzi urwu rwehembe dzebasa dzinogona kusangana nezvinodiwa zvemhando dzakasiyana dzebasa. Kudhonza 3D kunogona kubatsira kuwedzerwa kwechiratidziro uye nezvinodiwa zvebasa, uye kuita kuti vanoibata vanzwe vakasununguka kuzadzisa zvido zvemafambiro ese ehupenyu.
7. Tsigira yakatarwa masitaera uye yemakambani logo yekuvandudza yemakambani mufananidzo.
8. Kana mutengi aine masampuli, tinogona kuita zvinoenderana nemuenzaniso wevatengi, kana mutengi asina masampuli, tinogona kugadzira zvinoenderana nemaonero evatengi, kana mutengi anogona kusarudza edu epamhepo masampuli.
Inokodzera indasitiri yechiedza, indasitiri yekugadzira, indasitiri yekuvaka, yekushongedza indasitiri, kutakura zvinhu, kugadziridza mota kushambidza uye imwe nharaunda maindasitiri.
Pashure: Nguo yekuvhiya
Zvadaro: Zuva Rekupfekedza Zvipfeko
Mens Kunze Kwekupfeka
Kunze Kwekupfeka Kubuda